Ko Google SEO mutungamiri angavandudza nzvimbo dzangu here?
Kutsvaga injini yekugadzirisa inyanzvi, yekuongorora uye yekutsvakurudza nzira yakagadzirirwa kuvandudza kuonekwa kwewebsite yekutsvaga injini uye yechipiri mumutengesi wemari mutengesi. Iyo inonyatsozivikanwa kuti unoda kuwedzera nzvimbo yako maererano nezvose zviripo zvinotsvaga injini mirayiridzo. Sezvo Google ndiye mutambi mukuru pane imwe yenyika, unoda kuwedzera webhusaiti yako nekutevera mitemo yeGoogle. Iyi Google SEO mutungamiri inozvipira kune maitiro akachena machena evha SEO ayo achakubatsira kuti utsvake hutachiona hwehutano panzvimbo yako. Hapana huno-hutsva maitiro eSEO kusvika kuneGoogle inofunganya.
Google kugadzirisa mitemo
Google inomanikidza vatengesi vemuIndaneti kutevera mitemo yayo yekushandura webhusaiti kuitira kuti uvandudze ruzivo rwevashandi nehutsva iyi yekutsvaga. Google zvikwereti masayiti anopa vashandisi vevheji vane huwandu hwehuwandu hwehutano uye nehupamhi hwehupamhi-hwedhi yekugadzirisa maitiro. Zvakare, iyo yekupedzisira yeGoogle inoshandura inomiririra vadzidzisi vewebhu vanoita kuti webhusi yavo inotungamirirwa nemaselula-yakanaka.
Kana uri kurarama mitemo iyi yekugadzirisa, iwe uri pangozi kuti urasire nzvimbo dzako paSERP uye uwane chirango kubva kuGoogle. Iwe unofanirwa kuona kuti dzimwe nzira dzekuvandudza nzvimbo yehuwandu yehuwandu, iko, zvisiri pamutemo. Somuenzaniso, kuparadzaniswa uye kuvhara hazvibvumirwi nemutemo muU.SA ne UK.
Zviri kwauri kuti uteerere kana kuputsa mazano eGoogle. Zvisinei, kana uri munhu akangwara uye anotarisira webhusaiti, iwe unofanira kufungisisa nezvemigumisiro yehutsotsi hwekutsvaga maitiro.
Zvose zvese zvaunowana mune iyi Google SEO mutungamiri zvakakwana mukati memoyo yekutsvakurudza injini uye ichakubatsira kuti uvandudze nzvimbo yako yepaIndaneti iripo uye uwedzere ruvara rwenzira.
Google SEO mutungamiri: Keyword Research
Unofanirwa kutsvaga kutsvakurudza mashoko mashoma usati watanga nzira yako yekugadzira webhusaiti. Kutsvakurudza kwemashoko makuru kunokuita kuti usarudze zvakakosha uye zvakatsvaga kutsvaga mazwi ayo achakupa mukana wekukwezva vateereri vanotarirwa uye kuvandudza nzvimbo dzako dzepamusoro muGoogle. Kuti uite unhu hunokosha hwekutsvakurudza uye uone kuti ndezvipi mabhii makuru anonyanya kukwikwidzana, iwe unofanirwa kupa huwandu hwemakisi yakawanda. Zvinokurudzirwa kushandiswa musanganiswa werefu-muswe uye yakakura keywords. Kuti uite nyore kushandiswa kwemashoko emazwi ekuratidza, unogona kushandisa zvishandiso zvakasununguka zvekushandisa seGoogle Keyword Planner, WordStrem's Keyword Research Tool, uye Semalt Auto SEO Tool .
Google SEO mutungamiri: Kuvandudzwa kwe-site
Kana watozadza Google SEO tsvakurudzo yekodzero uye ukanyora runyoro rwemashoko makuru-refu kutsvaga, zvino yava nguva yekusika unhu uye huri nehuwandu hwekutsvaga vatengi vako. Mitsara inonyanya kutsvaga inokosha inofanira kuonekwa mune zvaunofunga nenzira yega uye inofanirwa kuve yakakosha munyaya. Kana zvisina kudaro, zvinyorwa zvako hazvigoni kuverengwa uye zvichaona spammy. Saka iwe unofanirwa kuvhara zvinyorwa zvako nemashoko makuru sezvo zvichiita kuti vaenzi vetsamba yako vakanganiswe uye vanopa pfungwa yekutsvaga injini yaunoyedza kushandisa tsvaga yekutsvaga.
Google SEO mutungamiri: Link Link
Nzira yakakwana yokuwedzera nzvimbo yako yekubudiswa kwewebsite ndeyokugovera zvaunenge uchiita mumasangano evanhu uye unovaka hukama hwakakodzera kune yako nzvimbo. Google ine mafikirwo akasiyana-siyana ayo anogara achidzokorora kunyoresa webmasters avo vanoshandisa mashizha ekugadzira mazano emhando. Kana ukasarudza kuwedzeredza maitiro ekugadzirisa nekutenga zvisungo, gadzirira kugamuchira chikamu chezvikwereti zveGoogle. Kuti uvandudze mararamiro ako uye kuwedzera kukwidza-kuburikidza nehuwandu, shandisa mabhuku ekutumira maitiro uye uite hukuru hwehutano huchagoverwa nevashandisi Source .